काठमाडौं । ‘मनसुनजन्य’ विपद् (मुख्यगरी बाढी पहिरो)बाट यसपटक १८ लाखभन्दा बढी मानिस प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ । गत वर्ष औसतबराबर पानी पर्ने प्रक्षेपण हुँदा ठूलो मानवीय क्षति बेहोरेको नेपालसामु सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने आँकलन गरिएको मनसुन चुनौतीपूर्ण रहने मौसमविद्ले औंल्याएका छन् । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ।
प्रकाशित : शुक्रबार, जेठ २८, २०७८०८:४४
कोपा अमेरिका: मेस्सीको कप्तानीमा अर्जेन्टिनाको टोली घोषणा ! को-को परे ? [सूची सहित]